पछिल्लो सातदिन भित्र देशभर कोरोनाले प्रभाव कस्तो रह्यो ? राजनीतिज्ञ, स्थानीय प्रतिनिधि एवं कलाकारहरूमध्ये को-को कोरोना संक्रमित बन्न पुगे ? यस हप्ताभर नेपालभर कोरोना भाइरस र लकडाउनले पारेको समष्टिगत प्रभावहरू यहाँ पढ्नुहोस्।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धमा भएका माग एवं निर्णयहरू :
प्रदेश-५ को राजधानी र नामाकरण टुंगाउने क्रममा यस हप्ता राजनीतिक वृतमा निकै विवाद देखियो । यस अलवा यस साता राप्रप्रा एकीकरण, वामदेव गौतम मुद्दा सुनुवाई, सचिवालय प्रस्तावित एजेन्डाकेन्द्रित नेकपा छलफल प्रमुख रुपमा देखे परे । यी सब घटनाहरूको सम्पूर्ण जानकारी यहाँ पढ्नुहोस् ।
एकैपटक १ सय १४ जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गरिएको छ । बुधबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले १ सय १४ जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको हो ।
पाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई खुला आवेदनबाट विश्वस्तरीय प्रशिक्षक छान्न सबै पक्षबाट सुझाब आएपछि क्यानले प्रशिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ ।
कोरोना महामारी भयाभह बन्दै गर्दा भक्तपुर नगरपालिकाले पुनः निषेधाज्ञा लागू गर्न माग गरेको छ । नगरस्तरीय संकट व्यवस्थापन केन्द्रको आइतबार बसेको बैठकले संक्रमणको दर बढेकाले संघीय सरकारअन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पुनः निषेधाज्ञा लागू गर्न माग गरेको हो ।